Fursadaha iyo Waxyoonsiga Loo Isticmaalay Buraashka Sawirka Sawirka | Abuurista khadka tooska ah
Rodrigo Santiago | | muujiye, dhowr
Fursadaha burushyada ku jira Sawirka Sawirka waa kuwo aan dhammaad lahayn. Waxaan ku sameyn karnaa sawir gacmeedyo layaableh aaladdan. Faa'iido gaar ah waa awoodda uu Sawir-bixiyuhu ina siinayo si aan uga sameysano burush dhisme kasta oo vector ah oo aan haysanno.
Waxaan u abuureynaa burush aasaasi u ah sawirkeena dulinka iyadoo la adeegsanayo suxulka. Sidaa darteed, waxa kaliya ee inala gudboon waa inaan abuurno xusul yar oo cabbir yar ka dibna u beddelayno burush farshaxan cusub oo leh Qalabka Ellipse (L).
Marka la abuuro, oo la doorto, waa inaan tagnaa qaybta buraashka oo aad doorataa Burush cusub on astaamaha qaab-dhismeedka qaab-dhismeed leh geeska laaban ee dhinaca hoose ee bidix ee sanduuqa burushka.
Marka xigta waa inaan doorannaa burushka farshaxanka haddii waxa aan dooneyno, sida kiiskeenna, ay tahay inaan ku sawirno sawir.
Daaqadda soo socota, waxaan u qaabeyn karnaa burushka. Waxaan ka tagi doonnaa balaca go'an oo ikhtiyaar leh Kala bixi si aad ugu haboonaato dhererka istaroogga la xushay
Marka buraashka la abuuro, tusaale ahaan, waxaan u isticmaali karnaa inaan ku buuxino shaashadda xayawaanka, sida kan sawirka soo socda ah, sidaas ayaanna ku siin karnaa qoto dheer.
Abuuritaanka istaroogyada burushkayaga sidii ay u yihiin timaha xayawaanka, mid mid ayaan marka hore u abuuri karnaa farqi madow oo leh asalka cas ee sawirka. Waanu kala duwanaan karnaa cabirka burushka si faaligyada la abuuray ay uga fiicnaadaan ama uga yaraadaan.
Marka xigta, waxaan sameyn karnaa isla sidaas laakiin burushka ku jira casaan ka fudud kan silhouette si farqiga u abuuro qoto dheer.
Ugu dambayntiina, waa inaan indhaha siino xoogaa yar oo taabasho ah oo liin dhanaan ah si aan uga dhigno kuwo nool.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Awoodda cadayashada ee Sawirka
Waxaan u maleynayaa inay fiicantahay inay bixiyaan tilmaamo ku saabsan sida loola dhaqmayo barnaamijka
Ku jawaab sheyla
Maalin wanaagsan ??
Waxaan isku dayayaa inaan dib u abuuro saameynta aad ku yeelatay sawirkaas laakiin ma heli karo wadada?
Waxaan hayaa sawir la mid ah saaxiibkay 4-lugood leh. Ma isiin kartaa xoogaa tilmaamo ah oo aan ku shaqeyn karo? Tilmaamo kasta?
Waxaan horey uheystey muuqaalka vector-ka, kaliya waa intaas. Waxyaabaha burushku igu adagyahay.
Runtii miyaan qadarin lahaa?